Posted by Tranquillus | Aogositra 29, 2018 | Mipetraka sy miasa any Frantsa
Tsy mora foana ny mahita asa atao amin'izao fotoana izao. Ary matetika ny olana amin'ny fahazoana asa any an-tsaha dia manintona antsika. Nahoana àry no tsy mamorona ny asanao manokana eo amin'ny sehatra mifanaraka aminay?
Iza no mifidy?
Voalohany sy lehibe indrindra, zava-dehibe ny ianarana ny dikan'ny hoe manolo-tena. Mazava ho azy fa tsy ampy ny ho lasa tomponao hahazo vola.
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia tsy tsotra. Tsy maintsy mahita faritra izay hahatonga anao haniry ny hifoha isa-maraina, mandany fotoana, manao ny asa manontolo ataonao. Ohatra, raha te hanao sary ianao, dia mety hihevitra ny ho tonga mpanao sary hosodoko, na mpanakanto. Raha tianao ny hanoratra, afaka ho lasa mpamoaka lahatsoratra ianao (bilaogy, tranonkala, orinasa, boky). Maro ireo safidy, noho izany dia tsy mora foana ny mifidy faritra iray manokana. Azonao atao koa ny manjary plonba na web developer, mahaliana anao izany! Manaova fanandramana amin'ny fahaizanao, mieritrereta momba ny tetikasa azo tsapain-tanana izay azo tanterahina amin'ny fetrany.
Raha vao tafapetraka ny sehatr'asa dia tokony hampiofana ny tenanao ianao. Ny hiantehitra amin'ny zava-bitany dia tsy ho ampy hanamboarana ny asany manokana sy hampandrosoana azy. Mamaky boky ara-teknika, manofana, mandray lesona, mandanjalanja tsy tapaka, na inona na inona saha. Noho izany, ho eo anilanao foana ianao amin'ny fitaovana, ny fahaiza-manao ary ny tsena mifanaraka amin'ny sehatry ny asa.
Eritrereto ny mety ho vitanao
Mifidiana ny endrika ara-dalàna (autoentrepreneur na orinasa)
Hamorona ny raharahanao
Vonona ho lasa mahaleo tena ve aho?
Avy eo dia tsy maintsy mandinika ny tombontsoa sy ny tsy fahampiana miandry anao ianao amin'ny maha-tomponao anao. Ny fiantombohan'ny hetsika dia mitaky fotoana betsaka amin'ny fampiasam-bola, ny fitondran-tena hiatrehana ny mety ho tsy mety sy ny fandavantena, ary ny vola ara-bola raha toa ka mitaky fampiasam-bola na fanofanana trano ny ohatra ataonao. Ny fidiram-bola ho an'ny tomponao dia tsy midika akory hoe manangom-bola nefa tsy manome ny tenanao.
Tsy maintsy manatanteraka asa maro izay haka fotoana ianao ary matetika no hitranga amin'ny fotoana mitovy amin'ny fifanarahana voalohany anao. Ireto misy ohatra vitsivitsy:
Mitadiava sy ampitao ny mpanjifa anao
Manangana ny tolotr'asa / fifanarahana.
Amboary ny vidiny.
Manokatra fivarotana, mandamina ny fitaovana.
Valio ny mpanjifanao.
Manaova baiko / fifanarahana.
Ambarao ny volanao.
Mijanona ho voalamina amin'ny toe-javatra rehetra.
Mametraha ny tanjonao manokana.
Eritrereto ny tahiry raha mitaky vola miditra.
Ny teboka manan-danja tsy manadino dia ny lalàna mifehy ny satanao ara-dalàna. Amin'ny maha-olona anao manokana, afaka manjary mpanatanteraka orinasa na mpandraharaha iray ianao. Noho izany, mitandre tsara alohan'ny hanaovana ny safidinao mba hahatonga azy ho tsara indrindra amin'ny tetikasanao.
Mamorona asa manokana, tombontsoa maro
Azo antoka fa sarotra ny fanombohana, saingy lasa mpampiasa azy no mendrika izany. Maro ny tombontsoa azonao hanombohana ity karazana tetikasa ity.
Manao varotra tianao ianao.
Mahazo fahafaha-manao zavatra ianao, mandamina ny fandaharam-potoanao manokana.
Hahazo fidiram-bola tsara ianao amin'ny farany.
Manomana ny fifandanjanao eo amin'ny fiainanao matihanina sy manokana ianao.
Afaka mampiasa ny fahaizanao amin'ny tetikasa samihafa ianao ary mahazo vaovao.
HAMAKY Kaonty fanofanana manokana: ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao
Ny asa atao amin'ny fitiavana dia ho asa mahomby
Noho izany raha manomboka manana faniriana ianao, faritra mifidy, ary mila mahaleo tena. Mianara mikasika ireo dingana tokony horaisinao alohan'ny hanombohany hananganana ny dingana an-tsitrapo ataonao amin'ny dingana!
Teo alohaFantaro ny fomba fampiaraham-baovao, ny toro-hevitra rehetra hanatrarana azy
manarakaNy foibem-pampianarana G Suite